ဧပြီ ၇ ၊ ၂၀၁၃ (အပတ်စဉ် တက်ဆက်မည်)
J’ai une voiture . ရေ အယူးန်း ဗွားကျူး ။ ကျနော့်မှာ ၊ ကျမ မှာ ကားတစီး ရှိသည်။
J’ai une belle voiture. ( ဆိုတာကတော့ နာမဝိသေသန Adjectif ဖြစ်ပြီး နာမ်ရဲ့ ရှေ့(သို့) နောက် မှာထားရပါတယ်) ကျနော့်မှာ ၊ ကျမ မှာ လှသော ကားတစီး ရှိသည်။( အမနာမ် အတွက် နာမဝိသေသန)
သာမန် အားဖြင့် နာမဝိသေသန Adjectif ရဲ့ အနောက်မှာ အမနာမ် အနည်းကိန်းဖြစ်လျင် “e”ထည့်ပေးခြင်း ၊ အမနာမ် အများကိန်းဖြစ်လျင် “ es ” ထည့်ပေး ခြင်း ကို လုပ်ပေးရပါမည်။(ပြောင်းနည်း ဝိသေသ များရှိသည်)
C’est beau. လှတယ် (အရာဝထ္တု ၊ ရာသီ ဥတုကို ပြောသည်) Il fait beau.ရာသီ ဥတုသာယာတယ်
bruyante ဆူညံသော C’est bruyant . ဆူညံတယ်၊ နားငြီးတယ် C’est …. (ဖေါ်ပြပြီး ) It is …
difficile ခက်ခဲသော difficille C’est difficile à dire. ပြောဖို့ခက်တယ်
grand et petit မြင့်သော ၊ကြီးသော ၊ petit သေးငယ်သော grande , petite ( အသံများကို dနှင့် t ထိ ထွက်ပါ)
ကတ္တား Subject + ကြိယာ Verb ” ETRE “ + နာမ် Noun သို့မဟုတ်Adjectif နာမဝိသေသန
Je suis patient(e). ( + Adjectif ) ရ စွီ ပါ့ စီယွန့် ကျနော် သည် စိတ်ရှည်တတ်သည်။ ဒီနေရာမှာ အရေး ကြီးပါသည်။ Adjectif ကို သုံးစွဲ ပြောဆိုတိုင်း ချိန်ညှိခြင်းAccord ပြုလုပ်ပေးရပါမည်။ ပြောသူသည် မိန်းကလေး ဖြစ်ပါက Je suis patiente. ရ စွီ ပါ့ စီယွန့် ထ်၊ ဟုပြောရပါမည်။ ” t ” သံထွက်ပါ
Ils sont …… အီလ် စွန့် ၊ သူတို့ သည် … ဖြစ်ကြသည် ( ” s “ ၂ လုံး ထပ်သောနေရာ၏ အသံသည် ” s “ သံ ထွက်ရမည်။)
Elles sont ….. အလ် စွန့် ၊ သူမတို့ သည် … ဖြစ်ကြသည် ( ” s “ ၂ လုံး ထပ်သောနေရာ၏ အသံသည် ” s “ သံ ထွက်ရမည်။)
Ils ont …. အီလ် ဇွန့် ၊ သူတို့မှာ … ရှိကြသည် ( ” s “ ၁ လုံး ထဲရှိသောနေရာ၏ အသံသည်” Z “ သံ ထွက်ရမည်။)
Elles ont …… အလ် ဇွန့် ၊ သူမတို့မှာ … ရှိကြသည် ( ” s “ ၁ လုံး ထဲရှိသောနေရာ၏ အသံသည် ” Z “ သံ ထွက်ရမည်။)